Buy HOUSE SALE IN NORTH DAGON (ID-155) (1,900Lks) in ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) on ipivi.com
ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) 12-07-2018
2 Stories house for sale in North Dagon Township, Bo Min Yaung Road. Land area - 2400 sqft, grant land.
Asking Price - 1900 Lakhs (Nego)
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းရှိ ရောင်းရန် နှစ်ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်ဖြစ်ပါသည်။ မြေအကျယ် - ၂၄၀၀စတုရန်းပေရှိပါသည်။ ဂရန်မြေ အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
ရောင်းရန်ဈေးနှုန်း - သိန်း ၁၉၀၀ (ညှိနှိုင်း)
မြောက်ဒဂုံရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် (ID-155)
အမည်: HOUSE SALE IN NORTH DAGON (ID-155)